Waa kee xidigga ay Juventus doonayso inay ku soo iibsato lacagtii ugu badneyd ee ciyaartooy ku soo gadato taariikhda? – Gool FM
(Liverpool) 11 Feb 2019 Wararka ka imaanaya Ingiriiska ayaa sheegaya in kooxda kubadda cagta Juventus ay qorsheyneyso in qiimihii ugu sarreeyay abid ee ay ciyaartooy ku soo iibsato ay kula soo wareegto xidigga kooxda Liverpool iyo xulka Masar Mohamed Salah.
Wargeyska ‘The Guardian’ ayaa maanta qoray in Juventus ay damacsan tahay in 175 milyan oo Giniga istarliinka ah (200 milyan oo Euro) ay ku soo qaadato weeraryahan Salah, waa haddii arrintaasi rumowdee, lacagtaas oo ka sarreysa middii ay Bianconeri ku soo iibsatay Cristiano Ronaldo xilli ciyaareedkan.
Warku waxa uu intaa ku darayaa in Juventus ay damacsan tahay in Salah uu noqdo beddelka Paulo Dybala oo wararku sheegayaan in uu naadiga ka tegi doono.
Waxaa xusid mudan in Neymar Junior oo u dheela kooxda Paris Saint-Germain uu yahay laacibka xilligan ugu qaalisan dunida kaddib markii kooxda Faransiisku ku soo iibsatay 220 milyan oo Euro 2017-kii.